ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ.ငါ..နေမကောင်းနှစ်ခါဖြစ်တယ်။တစ်တောင်လောက်အရွယ်ရှိပြီး၊ အမြှီးတုတ်၊ခေါင်း သေးတဲ့ မြွေတစ်ကောင်ကို.(မတော်တဆ)ခွကျော်ခဲ့ဖူးတယ်။(တော်သေးတာပေါ့..အသေကြီးမို့လို့)
နေ့တိုင်းလိုလို..အိမ်က.ဆူတာခံခဲ့ရတယ်။(ဒီကိစ္စမှာ..ငါဖက်က..လွန်တယ်လို့ နင်မထင်နဲ့နော်။ နေ့တိုင်း ဆူနေတယ်ဆိုကတည်းက..နင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။)
ဘာလုပ်လုပ်..အကောင်းမြင်မခံရဘူး..စားတော့လည်းစားပြန်ပြီ..ပြောတော့လည်း ပြောပြန်ပြီ၊ ငြိမ် ပြန် တော့လည်းငြိမ်လှချေလားတဲ့။(စားတယ်၊ပြောတယ်၊ငြိမ်တယ်ဆိုပြီး မှတ်တတ်ရင်တောင်..တရား ရ လောက်တယ်။)
ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ(အမေတို့ပြောတဲ့သကြားသာသနာမို့လားမသိဘူး)ငါဝဠ်နှစ်ခါလည်တယ်။တစ်ခုက..သူ ငယ် ချင်းထိုင်တဲ့ခုံကို.ဆွဲဖယ်မိတာ။နောက်တစ်ခုက.(ရည်းစားဦးက.ကလေးနှစ်ယောက်ရတာတောင် အသစ်မရှာတဲ့)ငါ့အစ်မကို“အပျိုကြီး”လို့.(ငါကိုယ်တိုင်)နာမည်တပ်ပေးခဲ့တာ။
သူတို့အပေါ်ငါက“စ”ချင်၊“နောက်”ချင်စိတ်နဲ့ပဲသီးသီးသန့်သန့်“စ”ခဲ့“နောက်”ခဲ့ပေမယ့်ငါ့အလှည့်ပြန်ခံရတော့ ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး။နေရထိုင်ရတာတစ်မျိုးကြီးပဲဟယ်။(ထိုင်ခုံဖယ်ခံရတာတော့နည်းနည်းနာသွားတာပေါ့၊မတတ်နိုင်ဘူးလေ.ကိုယ့်လှည့်ရောက်တော့လည်း.ပြုံးပြုံးပဲပေါ့။နောက်ပြီး..“အပျိုကြီး”လို့အခေါ်ခံရတာဘာမှမဖြစ်ပေမယ့်.ငါ့အစ်မလို.အသစ်မရှာမိ(မတွေ့မိ)မှာ..စိုးရိမ်သားဟး)။
ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ..(တော်တော်များများက.ပြောမနာဆိုမနာ)မိတ်ဆွေကောင်း တွေရလိုက်တယ်။ ဒီလက် ဆောင်ကောင်းတွက်တော့..နင့်ကို.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။(ငါ့တွက်နင်ပေးတဲ့ရှားရှားပါးပါးလက်ဆောင် လေးပေါ့)တစ်ချို့မိတ်ဆွေတွေကို..(အနေတည်ပုံရတော့)သိပ်မရင်းနှီးရဲသေးဘူးဟ။ :P
ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ..မနှစ်ကထက်(ငါ)ခွက်ပြောင်လာတယ်(မျက်နှာပြောင်တာကိုပြောတာနော်)။ဒီတော့..ဘာဖြစ်လဲ..အပြောခံရတာပေါ့..မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး.တည်တည်တံ့တံ့မနေဘူး၊ မိန်းမတို့ အိနြေ္ဒ “ဒေါ်လာ ပေးလို့မရဘူး”ဟဲ့၊ဒီလိုနေပါများရင်..ဘာကိုမှ အလေးအနက်မထားတတ်ဘူးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘာ.ညာပေါ့ဟယ်။ငါလည်းကျောပူသာခံနိုင်တာ.နားပူမခံနိုင်တော့(တကယ်တော့.ကျောပူတာလဲမခံနိုင်ပါဘူး။) အင်း..အင်း..ပေါ့..(ပြီးတော့လည်း..လုပ်ချင်တာလုပ်တာပဲ..ပြန်မပြောနားမထောင်ကိုးဟ။)
ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ..ငါ့ကိုယ်ငါ(အပင်ပန်းခံ)ညှင်းဆဲပြီး..အရွဲ့တိုက်ခဲ့တာတွေ..အများကြီးပဲရှိခဲ့တယ်။ မကောင်း မှန်း တော့သိတာပေါ့။အကျင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့..ပြင်ဖို့ခက်တယ်။သူကလည်း.ငါ့ရဲ့ဗီဇတစ်ခုလိုဖြစ် နေပြီလေ။(ခုချိန်ထိ..ကြီးကြီးမားမား.နောက်တရ၊ထိခိုက်မိတာ.မရှိဘူးသေးလို့.မှန်နေတယ်ထင်တာလဲပါ တာပေါ့။ကိုယ်ထင်ရင်..ကုတင်ရွှေနန်းပဲလေ..)
အဲဒါကြောင့်နင့်ကို(ပိုပြီးအဆပေါင်းများစွာ)စိတ်ဆိုးစွာနဲ့..ထားရစ်ခဲ့တယ် ၂၀၁၁ ရေ ...
မောင်ဘုန်း January 1, 2012 at 3:08 AM
နှစ်သစ်ရဲ့ မင်္ဂလာ နံနက်ခင်းပါ ... အပျိုကြီးရေ .. ရောင်နီလေးတော့ သန်းနေပြီ
အိပ့်ချင် စိတ်လည်း သန်းလာ ပြီ ..
အပျိုကြီး ...ရေးတဲ့ နှုတ်ဆက်စာ ဖတ်ပြီး အိပ့်တော့မည် ....
လမင်းငယ် January 1, 2012 at 4:14 AM
နှစ်ဟောင်းမှမကောင်းတာတွေကိုမေ့ပြီး နှစ်သစ်ရဲ့ 
♫♪★လွမ်းပိုင်ရှင်★♪♫ January 1, 2012 at 5:10 AM
bye bye 2011 ရေ
san htun January 1, 2012 at 8:53 AM
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ သမံစီးရေ..စတိတ်မှာတော့ Countdown လုပ်ဖို့ ၂နာရီခွဲတောင် လိုသေးတယ်..စောင့်လိုက်ဦးမယ်
Candy January 1, 2012 at 10:15 AM
နှစ်သစ်မှာ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေ မမသမီးစံရေ...
မဒမ်ကိုး January 1, 2012 at 11:28 AM
လူဇူးသမန်စီးလေး ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်ပါကွယ်း)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) January 1, 2012 at 11:58 AM
ခုတော့လည်း အဟောင်းကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ရပြီပေါ့လေ
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အသစ်ကို ကောင်းမွန်စွာကြိုဆိုကြစို့
မျှော်လင့်ချက်အသစ်တွေ ရောက်လာမယ် မဟုတ်လား
အစစအဆင်ပြေတဲ့ ၂၀၁၂နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ညီမ စံ
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) January 1, 2012 at 3:02 PM
အော်ဂလိုလား ပြောမနာဆိုမနာချစ်သူ အဲမှားလို့ပြောမနာဆိုမနာတငယ်ချင်းဆိုတာ
ဘူတွေလဲဟင် နာရောပါလား စံစံ
mstint January 1, 2012 at 3:03 PM
နှစ်လီနှစ်ဝ လိုအင်ဆန္ဒများ ပြီးပြည့်စုံပါစေ သမီးစံရေ။
jasmine(တောင်ကြီး) January 1, 2012 at 4:12 PM
တစ်ယောက်မပြောင်းရင်..သူကောင်းမဖြစ်ဘူးခံယူထားတာမို့..နှုတ်ဆက်ပါတယ်-----ရေးလိုက်တာပျံနေတာပဲ လူကတော့ မစွံတဲ့ စံစံ မဟုတ်ပဲကျန်ကျန်
၂၀၁၂ မှာတော့ အပြတ်ကျိုးစားလိုက်နော်ကျောင်းစာကိုပြောတာ
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် January 1, 2012 at 8:17 PM
ငါ့သမီးလေးလဲ 2011မှာ ဘာတွေအလိုမကျလဲမသိဘူး
kztk January 1, 2012 at 8:51 PM
နှစ်သစ်မှာ သမီးစံလေးတစ်ယောက် ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ ပြီး လိုအင်ဆန္ဒများပါ ပြည့်ဝပြီးတော့ အေးချမ်းသာယာတဲ့ မင်္ဂလာနှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်... သမီးစံရေ..
Happy New Year par naw...
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) January 2, 2012 at 8:44 AM
ရည်းစားဦးကို ဦးတဲ့ရည်းစား ရှိသွားပြီလား။
မံစိအမကတော့ သစ္စာရှိပါ့။ အင်း.. ဒါပေမဲ့ မစွံတော့တာလဲ ဖြစ်နိုင်သား။ ဟာ ဟ။
နှစ်သစ်မှာ များများပေါနိုင်ပါစေ။ အဲလေ... ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
ညိမ်းနိုင် January 2, 2012 at 2:10 PM